Gịnị bụ ihe kacha mma bike ìhè maka n'abalị ịnya? - Gba Ígwè
Isi > Gba Ígwè > Igwe igwe kwụ otu ebe na - enyocha 2015 - ịza ajụjụ a
Igwe igwe kwụ otu ebe na - enyocha 2015 - ịza ajụjụ a
Gịnị bụ ihe kacha mma bike ìhè maka n'abalị ịnya?
NaKacha mmaNjemIgwe ọkụ igwe kwụ otu ebe
Nhọrọ anyị. Cygolite Metro tinyere 800 USB.Kacha mmaọkụ ọkụ.
Onye na-esote. Blackburn Dayblazer 800 N'ihuÌhè. Ọ bụrụ n'ịchọrọ itinye eriri.
Nhọrọ anyị. 50 Nwunye CygoliteKacha mmaọkụ azụ.
Onye na-esote. Blackburn Dayblazer 65 N'azụÌhè.
Ego mmefu ego. Cygolite Hotrod Front 110 na Hotrod Rear 50 USB Combo.
Gịnị bụ ihe kacha ike igwe kwụ otu ebe?
Ihe kachasị mmaIgwe IgweNke 2021
Niterider 3600 Pro nke na-enwu na 3600 lumens bụ ugbu a na-enwu gbaaọkụ igwe kwụ otu ebe(ụgbọ alaọkụ ọkụna-emepụta ihe dị ka 1500 lumens). A na ere ya ihe ruru $ 600.
Ihe na-egbuke egbuke nke onwe yaọkụ igwe kwụ otu ebebụ Nitecore BR32 - a 1800 lumen OLEDọkụ, dị maka $ 130.
Daalụ maka ịtọgbọ onwe gị taa. Anyị ga-enyocha ọkụ igwe eletrik Magicshine Monteer8000S. Ajuju a na-achota anyi n’enwe otutu ihe n’egwuregwu igwe kwụ otu ebe bu otutu lumen ka m choro
Azịza ya dabere n’ebe ị nọ na otú e si ewu ọkụ ahụ. Azịza ya ga-abụ 800000 ọhụrụ igwe kwụ otu ebe Monteer8000s. Nke a na-anapụta ihe nzuzu 8000 lumens dị ka akụkụ nke ọhụụ ọhụrụ Monteer ha gụnyere batrị emelitere na lenses emelitere.
Nkwakọ ngwaahịa ahụ emeela nke ọma, ị nwere ike ịhụ na ọ nwere mbinye aka Magicshine ojii na agba agba mmanụ. Ha nwere ihe mara mma nke na-egbu maramara nke ezigbo ọkụ ma ọ bụ igbe kaadiboodu mara mma. Ka anyị gaa n'ihu mepee nke ahụ, ebe m na-eme nke a, anyị ga-agafe nkọwa ndị a.
Nke a bụ elu nke ahịrị na Monteer ma na-efu $ 400. Ọ nwere ụdị ejiji Garmin nke na-eme ọtụtụ Magicshine n'oge na-adịbeghị anya na ọ bụ ụzọ dị mma n'ezie ịkekọrịta ọkụ na ọtụtụ ugwu. Ọ nwere ihe eji emepụta ọkụ ise iji nweta ihe ngosi 8000 lumens ahụ dị ịtụnanya, nwere mpụta aluminom na n'ihu ya bụ nke dị mma.
O nwere igbe aluminom zuru ezu yana nnukwu batrị MJ-6118, nke a bụ batrị kachasị. Ọ bụ amps 7.2 na ntinye mAh 10,000 dị oke mma.
Ma maka ihe na-abanye n'igbe ahụ bụ isi nke onwe ya, nke bụ ihe ijuanya na ọ pere mpe, ị ga-eche na ọ buru ibu karịa maka 8000 lumens. Ihe na-abụghị obere bụ batrị, nke mara mma nke ukwuu. Get nweta eriri abụọ iji tinye ya na etiti gị ma ị ga-enweta mpụga na mbido.
Nke a abụghị Magistine TTA, ọ bụ nsụgharị nsụgharị, mana nke aluminom na otu akụkụ. Ọ dị ka ị nwere ike itinye ihe na azụ mgbe ị nwere kposara na puck. Ga-enweta ọtụtụ spacers ịnabata dị iche iche handlebars na ị ga-enweta plọg USB.
Nke ahụ dị ezigbo mma, yabụ batrị batrị nwere njikọ nwere ike iwepu ya wee pịa ebe, nke a bụ njikọ njikọ ojii, ọ bụghị njikọta oroma anyị hụrụ na ụfọdụ ọkụ ọhụrụ Magicshine. Also na-enweta USB-C na ọdụ ụgbọ USB iji kwụọ batrị ntakịrị ntakịrị. Allen igodo ebe a iji wụnye ihe nkwado dị n'ihu yana obere ndu.
Ugbu a, ka anyị lelee ịdị arọ nke ntọala igwe kwụ otu ebe a. Nke mbụ, ka anyị bido na batrị ahụ, nke ga-abụ oke oke ya. Anyị nwere eriri abụọ yana plọg ịchọrọ iji jikọta oriọna ahụ, ha niile dị gram 422.
Odi ezigbo ike, mana otutu ike, yabụ na oriọna nwere ike inwe oge di egwu. Ihe nkwado dị n'ihu, nke bụ ihe owuwu aluminom mara mma, na-abata na gram 34, ebe isi ọkụ n'onwe ya na-atụle 144 gram. Ugbu a, ka anyị lelee dabara na ngwụcha nke Monteer 8000S.
Ọ bụrụ na ọkụ a mara gị nke ọma, ọ bụ maka na ọ na-ekerịta otu ụlọ ahụ dị ka Monteer 6500 dị ugbu a na ọkwa Montee r ọhụrụ ahụ, ha emelitere ndị LED ahụ yana batrị iji nweta ike karịa. Nke a bụ nkịta dị elu, nke a bụ 8000S, ha nwekwara 6500 ọhụrụ yana ụdị ndị dị ala dị ka 3500 na ha pere mpe, ọkachasị site na nhazi wired, ọkụ ihu ya n'onwe ya dabara n'ọbụ aka m wee nye ya 5 LED -Designs mara mma dị fechaa n'ihi na ha nwere ike itinye njikwa batrị niile na batrị n'onwe ya wee lekọta nlekọta ọkụ na ọkụ ọkụ na ọkụ ọkụ n'onwe ya.
Nke a pụtakwara na ị nwere ike ịrịgo ya n'elu okpu agha gị n'ụzọ dị mfe dịka ọ dị ezigbo ọkụ ma ị nwere ike ịgbanye waya ahụ. Ka anyị wụpụ n’ime ya ma gafere ihe ngosi oghere ọhụrụ ahụ, yabụ ọ bụ imewe ọkụ ise dị ka nke gara aga, ị nwere ike ime nke a n’ụdị ụzọ abụọ dị iche iche, ahịrị elu bụ ọkụ mmiri wee gbadaa ala abụọ, mmiri ọkụ abụọ ahụ. . Ọ bụ ntakịrị ihe na-enweghị mmetụta dịka ala abụọ LEDs nwere atụmatụ a dị ntakịrị nke na-eme ka ọkụ ahụ gbasaa, mana nke ahụ bụ n'ihi na ọkụ ndị kachasị elu nwere ogo ogo 32 na-agbasa ka ị wee nwee ike iju mmiri karịa ka ala ala abụọ dị ogo 21.
Ugbu a, ị nwere ike ime nke a na ala abụọ, atọ kachasị elu, ma ọ bụ ha niile ọnụ na ụdị ngwakọ. Ejirila ụdị ndị a dị n'okpuru ebe a, nke nke elu na-ejikwa atọ Cree XHP 50.2s, ebe a na-echekwa ụdị XLM2 abụọ dị ala iji mee ka ọtụtụ ọkụ nwee ọkụ dị egwu nke ukwuu ka ị ghara ịhụ ndị na-ekesa ebe a ma ọ bụ don ' hụ hụ osisi bepụ.
Yabụ ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ a n'okporo ámá, enwere otutu ntigbu ebe a. Ugbu a, ọ bụ ezie na ọ dị ka ọ maara nke ọma, a na-eme ya nke ọma ka ọ bụrụ yabụ aluminium ị nwere obere ntanye ebe a maka ikpo ọkụ. O nwekwara ọkwa IPx5, nke pụtara nguzogide mmiri dị mma.
Ha na-etinye oghere onwe ya azụ n'azụ ikpe ahụ n'ihi ya, ọ dịghị akụkụ ọ bụla ebe a n'adịghị ka ọtụtụ ọkụ ọkụ na-agagharị agagharị nke ga-enwe mpempe akụkụ maka mma akụkụ nlele dị mfe nke mere ka kọmpụta dị ukwuu gbasaa gbadaa ruo ala na nke kachasị mma Njirimara bụ o doro anya na ugwu Garmin ma na-arị elu site na ndị nrụpụta dị iche iche. Nke a bụ ihe Magicshine mere na ọkụ ọkụ ọhụrụ ha niile na ihe m nwere olile anya na ndị nrụpụta ndị ọzọ ga-eburu nke ọma na nke ahụ ga-eme ka ị mara ma batrị dị n'etiti 21 na 100 pasent, isii ruo 20 ma ọ bụ karịa efu ise. Ugbu a, UI dị ntakịrị, ọ bụ otu pịa iji gbanye ya, pịa ugboro abụọ ka ọ gbanwee n'etiti na ala, wee nwee oghere ogologo iji gbanye ya na otu pịa, na ọnọdụ iji tụgharịa ya na anyị Aga m abanye n'ime nke ahụ mgbe emechara ọkụ.
Ugbu a batrị batrị bụ ihe ọzọ dị mma na ebe a, nke a bụ nnukwu, MagicShine kachasị ike. Ọ ka bụ otu ụdị ọnụọgụ mana emelitere ya iji tinye lithium 21700 Iji sel ion, nke pụtara na batrị anọ dị, nke ahụ jikọtara gị na ikike 10kAh milliampere nke buru oke ibu ya mere ọ dị kọmpat. Ọmarịcha mma ụlọ dị mma ebe a ma ị nwere ike ịhụ na ọ nwere USB Type-C na-akwụ ụgwọ kwa, njirimara ọzọ mara mma.
Yabụ mgbe m buliri elu ị nwere ike ịhụ na ị nwere gasket mara mma wee USB Type C n'elu yana obere batrị na-enyocha ihe ebe a, yabụ ọ dị mma na ị nwere ike ịhụ ụzọ atọ ma ọ bụ ma eleghị anya ụzọ anọ ọzọ, ka gwa gị ihe batrị na-eji dị ka ike akụ, nke ahụ bụ ihe mara mma mma ka ị nwere ike wepu eriri njikọ akụkụ nke mere na ala nke ya na-iche mgbe m napụpụ obere roba roba m snap n'ime ebe. Nke a bụ ihe agbakwunye na ọkụ ọkụ igwe kwụ otu ebe, mana ọ bụrụ na ị naghị eji nke a dị ka ọkụ igwe kwụ otu ebe, ịnwere ike ihapu ya, tinyekwa uzuzu uzuzu ya, wee jiri ya dị ka ụlọ akụ na-akwụ ụgwọ maka ngwaọrụ ndị ọzọ, ọ bụghị ihe doro anya, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị nwere ya n’akụkụ ibe gị. Abù bụ ntakịrị ihe lekwasịrị anya karịa elu tide, ma ọ bụ nnọọ ike ịmata ọdịiche dị mgbe ụgbọala.
Enwekwara ụdị mmepụta dị iche iche 15 maka ọkụ a ka ị nwee ike dị iche iche anọ maka usoro ọ bụla. Ha nwere Eco, Low, Medium, High yana Flash mode ka ị nwee nhọrọ ndị nwere ike ịhazi maka njem ahụ. The doo àgwà bụ n'ezie magburu onwe, ọ bụ nnọọ mbara, ọ dịghị hotspot, mma nkesa na n'ezie dum.
Ma ị na-agba ọsọ mgbada ugwu ma ọ bụ na-ebugharị n'okporo ụzọ, nke a nwere ohere zuru oke iji soro gị. Ihe ọzọ dị oke egwu gbasara ọkụ nke a dị ike bụ na ọbụlagodi ntọala dị ala na-enwu karịa ọkụ ndị kachasị na-enwu ọkụ ma ị ka nwere ihe karịrị elekere 10 nke oge ịgba ọsọ. Ọnọdụ ngwakọ zuru oke na-amasị anyị nke ukwuu nke na-atụba ọtụtụ ọkụ, ị nwere akụkụ dị mma gbasaa na nnukwu ịtụfu.
Ihe ngosi 8000 zuru oke bụkwa ara nzuzu, ọ na-enwu n'okporo ámá ma gafee n'elu maka ọtụtụ ebumnuche. Igwe ọkụ ebe a dịkwa ezigbo iwe, ọkachasị na 2400 lumens. Ugbu a mgbe ị na-akwọ ụgbọala ọzọ ọ na-esiri ike ịkọpụta ọnọdụ ị nọ, na dịka ị pụrụ ịhụ, ọnọdụ ọkụ na-adọpụ uche nke ukwuu ma nwee ike ịmebie nghọta miri emi gị, ma ọ bụghị na ọ dị mfe ịgafe usoro ịgbanwee.
Anyị chọpụtara na obere na ọbụna Eco zuru ezu, ebe ntọala dị elu fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ na-enwu gbaa maka ọtụtụ ụgbọ ịnyịnya, mana 8000 lumens mara ezigbo mma dịka ị nwere ike ịhụ ebe a na ọ na-enwu ihe niile ma ọ dị mma. Ọ bụ ihe na-atọ ụtọ ịgba ịnyịnya n'abalị, ọkachasị na ihe dịka 8000 dị na njikwa gị, ma ọ bụghị ya, ọ dị mfe ịgbanwee n'etiti ọnọdụ dị iche iche ma nwee mgbasa zuru oke iji debe ihe n'akụkụ gị na n'ihu ị hụrụ. Ugbu a, ka anyị mee ntakịrị ntụnyere dị n'etiti Monteer na ụfọdụ ọkụ igwe kwụ otu ebe ndị ọzọ n'ahịa.
Dịka ị pụrụ ịhụ ebe a, enwere m ọtụtụ ụdị dị iche iche Magicshine. MJ-908, MJ-906 na Eagle F3 yana batrị ndị a jikọtara maka ntụnyere yana ụfọdụ ọkụ na-ebugharị dịka Allty 2000 na Fenix ​​BC21R v2. Ozugbo ahụ enwetara m Monteer 8000S na 6500S.
Can nwere ike ịhụ na ha bụ otu, yabụ ha gbanwere ike ka ị wee nwee otu batrị, ebe ọdịiche dị iche iche nke Monteer ji obere batrị. Ya mere, a na-ahazi ha iji mepụta ike ọzọ, ọkụ ọzọ nke ìhè, na ma eleghị anya obere mgbanwe lens. Ọ bụrụ na i jiri ihe ndị a tụnyere ọkọlọtọ ọkọlọtọ gị ozugbo, ị ga-ahụ ọkụ ọkụ na batrị ndị arụnyere n’ime ọkụ ọkụ nke ị ga - emecha nwee nnukwu ọkụ ihu ma e jiri ya tụnyere ọkụ.
Ọ fọrọ nke nta ka ọkara nha otu ị ga - esi nwee nnukwu okpomoku na LEDs nke bụ nnukwu ego na nke ahụ ma ị ga - enweta ọtụtụ ike karịa ebe ndị a na - ejikarị n'okpuru 2000 buru ibu, otu Garmin ugwu, mana ị nwere ike ịhụ ihe kpatara ya nke ukwuu, mana o doro anya na ha niile n'otu atụmatụ pụtara na ị gaghị erugharị na batrị buru ibu. Ugbu a jiri nke a tụnyere ụfọdụ igwe ọkụ igwe onyonyo ndị ọzọ nke Magicshinemountain. Nke a bụ n'ezie ọkacha mmasị m, Ugo F3, ọ nwere atụmatụ LED anọ, otu echiche n'agbanyeghị na ị nwere otu idei mmiri ahụ na ọkụ ọkụ.
Nwere ike ịhụ ụdị ihe yiri ya, F3 buru ibu karịa, ha nwere bọtịnụ bọtịnụ abụọ na nlele batrị doro anya nke dị mma na nke ahụ na nnukwu ikpo ọkụ ọkụ. Ọ bụ ihe ijuanya na ndị Monteers nwere obere ụdị ihe a na ị ga-eche na okpomọkụ ga-achọ nku dị ukwuu karịa, mana n'ezie ha na-arụ ọrụ nke ọma n'agbanyeghị obere nha. Yabụ ị ga - ahụ na ha mekwara ka mma ụlọ dịkwuo mma, ebe a bụ plastik niile, aluminom niile na ezigbo ọcha.
Ugbu a ụfọdụ n'ime ọkụ MJ ọhụrụ ha bụ 906 ka ị wee nweta atụmatụ 5 LED nke m chere bụ 3200 lumens. Nwere ike ịhụ otu ihe dị obere, mana ntakịrị karịa na plastik ọzọ, ọ na-ejikwa ihe ochie roba ha. Echere m na ndị ọhụrụ gbanwere Garmin nke bụ mma mma.
Ugbu a, ọ bụrụ na ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ 8000 mara nke ọma, ọ bụ n'ihi na ị nwere 8000 lumen MJ-908. Nke ahụ bụ ihe ngosi 8000, ọ bụ ezie na ị nwetaghị nke ahụ, mana ụdị nnukwu ihe ị nwere ike ịhụ. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okpukpu abụọ, ọ bụ ihe ọkụ ọkụ niile, nke ọzọ bụ ihe mara ezigbo mma ka ị wee hụ ọnọdụ ị nọ.
Na Monteer ị maghị n'ezie ọnọdụ ọ bụla n'eleghị anya n'elu, mana n'ọnọdụ ọ bụla ọ dị mma ịhụ ike ọzọ, ikike a tụrụ atụ karịa ma e jiri ya tụnyere usoro ihe dị obere. Ihe ọzọ masịrị m nke ọma banyere emelitere ọkụ Monteer. Karịsịa usoro 6500 na 8000 emeela ka batrị batrị dị mma.
Ha na-eji batrị ion ion lithium 18650 nke nwere batrị isii ebe a, yabụ ị nwere ike ịhụ atọ ebe a, atọ ebe a dị arọ ma chunkier. Ha nwekwara nke buru ibu karị, nke a bụ MJ-6090, yabụ ị ga - ahụ nke ọma Ọ na - eburu onu ụlọ mmiri gị niile, mana ọ nwere ọmarịcha mpempe akwụkwọ ebe a, mana ọ dị oke arọ. O nwere ikike karịa batrị ndị ọzọ anyị na-ele anya ugbu a.
Ọ bụ 10.4 megide 10.0 anyị na-ahụ na Monteers, mana ị nwere ike ịhụ obere ibu.
Ọ bụrụ n ’idowe akụkụ ndị a, ị ga - ahụ na ha slimmed ya ala, emere m ka ọ dịkwuo mfe iburu ya ma jiri plọgị ahụ nwere ike iwepu ya ị ga - ahụ na ọ gaghị ewepu ya. Nke ahụ bụ ihe m masịrị n'ezie banyere batrị Monteer ọhụrụ ahụ, ị ​​nwere ike ịkwanye ya ma tinye okpu ájá wee tinye ya n'akpa gị ma buru ngwa ọrụ mgbe ị na-aga ma ọ bụ jiri ya dị ka ụlọ akụ ike . Ugbu a, ka anyị gabiga uru na ọghọm nke Monteer 8000S.
Ihe na-amasị anyị maka ọkụ bụ na ọ na-enwu gbaa ọchị, ọ na-ekwu hoo haa n’elu, mana ọ dị oke mma ịnwe ọkụ na-enwu enwu, ọkachasị n’ebe a na-ere ego. O siri ike ịchọta ihe ọzọ $ 400 nke nwere 8000 lumens iji chaji batrị, nke na-enye gị ohere iji ya dị ka ụlọ akụ ike mgbe ị na-adịghị akwọ ụgbọala. Na mkpokọta, ogo ụlọ ahụ dịkwa mma na njikọ USB na-adịgide adịgide nke na-abụkarị ebe na-esighi ike maka ntọala batrị nwere wired.
Offọdụ n'ime ala nke ìhè bụ eziokwu na enweghị DRL nke ga-abụrịrị atụmatụ mara mma maka ịkwọ ụgbọala ụbọchị. Ọ dịkwa oke iwe na ịgbanwee site na ọnọdụ ngosi ọkụ ma ọ dịghị onye chọrọ ụzọ ọkụ ọkụ atọ dị iche iche maka ọkụ a. O nwere ike bụrụ ihe na - akpaghasị, ọkachasị mgbe ị na - agbagharị, ịkwesịrị ịdị njikere ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịga ngwa ngwa.
O nwekwara oke ugwu maka okpu agha, nke pụtara na ọ naghị adaba adaba ịdabe ya na okpu agha gị, agbanyeghị na oriọna oriọna ahụ dị ọkụ. Olileanya ọgbọ ọzọ ga-enwe atụmatụ a. Ọ bụrụ na itinye ihe niile ahụ n'otu akaụntụ, ọkụ ahụ ga-enweta 8.9 n'ime isi 10.
N'ọtụtụ ụzọ nke a bụ ọkụ ọkụ igwe kwụ otu ebe, ọ bụ naanị ike na ala dị ala Nweta njikọta Bluetooth ma ọ bụ ngwa ekwentị. Yabụ ọ bụrụ na ị na-achọ ihe nwere arụmọrụ dị elu nke a bụ nhọrọ dị ukwuu. Daalụ maka ilere nyocha a, echefula ịmasị na ịdenye aha.
Nwere ike ịhụkwu ọdịnaya anyị na weebụsaịtị anyị na thesweetcyclists.com ma ọ bụ soro anyị na Instagram @. Nke a bụ ndị mara mma na-agba ịnyịnya ígwè na-echetara gị ịnụ ụtọ njem ahụ!
Kedu ihu igwe kwụ ọtọ nke kachasị mma?
Nakacha mma n'ihu igwe kwụ otu ebe
Cateye Ampp 800Ihu Igwe Igwe Ihu Igwe.
Halfords 1000 LumenN'ihu ihu.
Halfords Advanced 1600 LumenIgwe Igwe Igwe Igwe.
Knog PWR onye na-agba ịnyịnya 450 LumenN'ihu ihu.
Ọnwa Meteor Storm LiteN'ihu ihu.
Ọnwa Meteor X Auto ProÌhè.
Gịnị mere ọkụ igwe kwụ otu ebe dị oke ọnụ?
Ojuju ajuju:Igwe ọkụna-adịkarịdị oke ọnụkarịa ọwa ndị ọkọlọtọ n'ihi na ha bụ ngwaahịa ọkachamara n'obere ahịa. The ala ina + elu desirability mmetụta boosts ndị ahịa ọbụna n'ihu.
Mee ka ìhè dị! N’isiokwu a anyị na-enye nkọwa zuru ezu ma na-eduzi ihe niile metụtara ọkụ igwe kwụ otu ebe. Anyị ga-agabiga ụdị dị iche iche dịnụ, ezigbo ojiji maka ha, yana atụmatụ ndị dị mkpa ejiri ozi a niile, ugbu a ị nwere ike ịmata ọkụ ndị ị ga-eji oge na ebe. Iji gosipụta ụdị igwe ọkụ dị iche iche, na-ekele ndị ọrụ ibe anyị na CatEye, anyị nwere oke zuru oke ebe a, n'ihi na nke ọma, ha na-ekpuchi isi ihe niile dị mkpa ịchọrọ ịtụle.
Ya mere ike, visibiliti, batrị, yana nke a smart technology na igwe kwụ otu ebe. Enwere ọkụ ọkụ igwe kwụ otu ebe ndị ọzọ nọ ebe ahụ, mana ha daba n'ụzọ abụọ: ọkụ ị ga-ahụ na ọkụ ịhụ. Inghụ ọkụ ọkụ na-esikwu ike karịa ka emee ka ị mata ụzọ ma ọ bụ ụzọ ị na-aga.
Ebe a na-ahụ ọkụ bụ ndị izugbe Ha anaghị enwe ike, na-adịchaghị ọnụ, ma na-enyere ndị ọrụ okporo ụzọ ndị ọzọ aka ịhụ ebe ị nọ. Ugbu a, ọtụtụ ọkụ na-enwekarị ọnọdụ nchapu na ọnọdụ kwụ otu ebe. Na mkpokọta, ọkụ na-esighi ike ị nwere, ka ị na-adabere na ọnọdụ a na-enwu gbaa n'ihi na ndị ọrụ okporo ụzọ ndị ọzọ ga-ele anya na ihe na-atachasị karịa ihe na-adịgide adịgide, kwere ya ma ọ bụ.
Determinedchọpụta ma ọ bụ ịhụ ma ọ bụ ịhụ ọkụ ka a na-ekpebisi ike site na ike lumens ị nwetara site na ọkụ ahụ. Were nwa ọjọọ a, dị ka ihe atụ. The CatEye Volt 6000, nke n’ekwu oke egwu.
Ọ dị ka ịrapara ọkụ ihu ụgbọala ma ọ bụ nnukwu ọkụ ihu ụgbọ ala na njikwa ahụ na ịnya ha. Site na ihe ahụ ị nwere ike ịkpọ Batman dị ka ị dị n'ehihie ugbu a, ejiri m n'aka na ọkụ ọkụ 6000 dị ka nke a ga-abụ ntakịrị okwu ikwubiga okwu ókè maka ọtụtụ n'ime anyị mgbe anyị na-anya ụgbọala n'okporo ụzọ na-adịghị mma. Kama, anyi nwere ike nweta ihe dika nke a.
Ihe ọkụ 800 nke lumen, nke dị obere karịa ekele batrị ebe a. A sị ka e kwuwe, obere ike pụtara obere batrị dị mkpa iji gbaa ọsọ. O yikarịrị ka ị ga-enweta ndụ karịa na ọnọdụ kachasị.
Ọbụna ma ọ bụrụ na i jiri ya tụnyere nwanne ya nwoke nke okenye ebe a, Volt 1700, nke karịrị okpukpu abụọ karịa ike ya, ka dị gịrịgịrị ma dịkwa mma. Ya mere, mgbe ọ nọ na njikwa ahụ, ọ gaghị ebufe ya na karịa ihe niile ị nwere ike ịhazigharị akụkụ ahụ ka ị ghara ịkwanye ndị ọrụ okporo ụzọ ndị ọzọ ụjọ. Ọzọkwa, buru n'uche na mba ụfọdụ nwere iwu chọrọ maka ụdị ọkụ dị iche iche na ebe a ga-etinye ha, yana ịrụ ọrụ.
Yabụ na ị ga-eso ndị ọrụ okporo ụzọ ndị ọzọ nwee nsogbu. Kedu maka ọkụ ndị ọzọ mgbe ahụ? Ka anyị gaa n’ụlọ nyocha iji lelee ha. Mgbe ahụ laghachi studio ka anyị wee nwee ike ịnagide ọkụ ndị a niile.
Yabụ ka anyị soro mgbagha a nke anyị kwurịtara okwu, ọkụ 400 lumen pere mpe karịa 800. Ọfọn, ọkụ 400 nke ọkụ ọkụ nwere ike ịbụ maka opekempe m ga-achọ igagharị n'okporo ụzọ na-enweghị ọkụ na ọkụ, dịka ọmụmaatụ 400 lumens , ma ọ bụ ọbụna 200, nke pụtara ogologo ndụ batrị, na nke ahụ bụ n'ezie uru na-atụle ma ọ bụrụ na ị na-agbalị na-agba ịnyịnya a bit ọzọ n'ime desert na chọrọ na mmezi bit nke visibiliti si a ìhè ka ị mara nwere ike ịhụ dị ka ihe gburugburu 100 ka 200 lumens akara ga-ezu. Ihe kpatara ị ga - eji nweta obere ike bụ na ọkụ ọkụ anaghị adị ọnụ ala, pere mpe ma na - adịkarị ntakịrị.
Ọfọn, ihe nlere a dị na nkea nwere ụdị ọhụụ karịa ọ ga-enye gị obere visibiliti na ijide n'aka na ndị ọrụ okporo ụzọ ndị ọzọ nwere ike ịhụ gị. Agbanyeghị, enwere nnukwu ọkụ ihu ndị ọzọ ahaziri iji nyere gị aka ịhụ n'akụkụ dị iche iche ma n'ezie, ha na-adaba n'ogige nke ọkụ na ụdị 'to-be-vised'. Ya mere, ọkụ a X3 ọkụ a nwere nwanne nwoke tọrọ na nwanne akpọrọ X2 na X.
Naanị ha anaghị ewepụta ọtụtụ lumens. A haziri ha ka ha ghara ịhapụ ezigbo ụzọ ụzọ na-enwu gbaa kamakwa n'akụkụ ya ka ị wee hụ gị ntakịrị ka ị na-akwọ Top tip ebe a naanị m ga-ahapụ gị na Onis iji bulie visibiliti gị, jiri ihe karịrị otu ọkụ. Ọbụna na ị ga-agwakọta ntakịrị ntakịrị ka otu onye wee kwụsie ike ma otu na-enwu.
O gha enyere gi aka ihu otutu uzo ndi ozo? Onye ọrụ na-enyere gị na nzukọ mgbe ị na-agba ọsọ nke batrị. Ihe, ee, ọ mere m n’oge gara aga yabụ ọ bụ ezigbo obere nkwado ndabere nke inwere n’etiti gị. N'ezie, ụfọdụ ọkụ ka nwere batrị nwere ike ịgbanwe.
Ugbu a ọkụ niile anyị kwurula ugbu a bụ ngwaọrụ USB nwere ike ịbugharị na nke ahụ bụ otu n'ime mpaghara teknụzụ ọkụ nke batara na afọ ole na ole gara aga. Yabụ, ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ na - adịghị ahụkebe, ị ka nwere ike ịchọ ihe dịka Nke a bụ ụdị Omni, nke na - arụ ọrụ ahụ, ọ bụ ezie na ọ naghị ewepụta otu arụmọrụ dị ka ihe nwere nnukwu batrị. Otú ọ dị, ezigbo ọkụ dịtụ iche dịka a na-ahụkarị ha kama iji ya.
Otú ọ dị, ihe dị oké ọnụ ụdị dị ka Rapid X3 ebe a, nke bụ nwanne X3 ihu na anyị kwuru banyere ya na mbụ; Ha nwere ikike ọkụ karịa, na-eme ka ha dị mma maka ọkụ na-agba ọsọ n'ehihie ma na-eme ka ndị ọkwọ ụgbọ ala mata maka ọnụnọ gị site na ịga n'ihu. N'eziokwu, n'obodo ukwu na mpaghara ndị ewuru ewu, nke ahụ abụghị echiche mbụ, mana mgbe ị na-agba ọsọ ọsọ, ụzọ mepere emepe, aga m atụle nke ahụ. Ma ọzọ, ịchọta ọmarịcha ọkụ mara mma ga-adị mma iji nyere gị aka ịpụtakwu ọhụụ n'okporo ụzọ, mana echere m na anyị kwesịrị ịkpọga ya n'ọkwa ọzọ wee gbakwunye ụfọdụ mgbakwunye na isi anyị na ọkụ azụ na-agbakwunye njedebe aka, dochie ogwe aka njedebe njedebe plọg ma nye gị mgbakwunye ọkụ.
Ugbu a, ihe dị ezigbo mkpa n'ụwa nke ọkụ a na-ebugharị ebugharị. Dịka ọmụmaatụ ihe dị na oche oche gị. Ma ewepụla ọkụ n’elu oche gị.
Kama, tinye ya n’ihe dịka ọkụ n’elu ọkwụ ụkwụ gị. Ugbu a ekwuolarị m banyere batrị USB, mana enwere n'ezie ihe na-adịbeghị anya n'ụwa nke ọkụ na nke ahụ bụ teknụzụ mara mma. Dịka ọmụmaatụ, ọkụ mmekọrịta ndị a na-agwa ibe ha okwu na ntanetị.
Ya mere, ọ bụrụ na m agbanye otu n'ime ha, ndị ọzọ ga-eme. Ma ị nwere ike ịhazigharị usoro àmụmà na ihe ndị yiri ya na ngwa ahụ enyere. Nke ahụ pụtara na ị gaghị echefu ịgbanye otu ọkụ gị, nke m na-eme ndị ọgba tum tum site n'oge ruo n'oge.
N'agbanyeghị batrị na ọkụ azụ, ha na-echefukarị itinye ya. Mana site na ngwọta enweghị nchekwa a, ọ gaghị eme. Ma mgbe ahụ, maka ihe na-adịghị anyị mma n'ebe ahụ, ị ​​nwere ike ịlele ole ndụ batrị fọdụrụnụ, yana ịnata ọkwa mgbe ọ dị ntakịrị karịa ka ị ghara ijide gị ọzọ.
Ọ bụ ngọzi nye onye dị ka m. Na Si Richardson. Yabụ, na nkenke, ọmarịcha ụdị dị iche iche nke igwe kwụ otu ebe dị iche iche, site na nkeji ndị ọrụ nwere ike dochie anya, n'ụzọ ziri ezi ruo ihe ga-eme ka ihu igwe na ihe ọ bụla na ihe niile gbara ya gburugburu.
Onwere ihe diri udiri igwe n’iile. Ugbu a, ị ga-ekpebi ụdị nke ịchọrọ iji hụ ma ọ bụ ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ya, wee kwụọ ụgwọ ịtụle ndụ batrị ahụ, dabere n'ogologo oge ị ga-akwọ ụgbọala. Nke ikpeazu, dikwaa nihi na ikwere na ya ma obu na ikwenyeghi, obughi oria nile gha adabara igwe kwụ otu ebe nihi na mbata nke aerodynamic frame tubes and handlebars, obughi ihe nile g’abia.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịnwe ogwe aka, ị ga-achọ ọtụtụ ma ọ bụ ugwu iji jide ya, dị ka nke a, buru nke ahụ n'uche. Chọghị ịzụta ihe ọ bụla agaghị eji ya eme ihe. Enwere m olile anya na nke a baara gị uru ọ bụla, ọ bụrụ na ọ dị, cheta ibute ya na ala ebe ahụ ma soro ndị enyi gị kerịta ya.
Echefukwala ileta ụlọ ahịa GCN na shop.globalcy clingnetwork.com, ebe anyị nwere ọtụtụ ihe ọma iji gbalịa.
Ma ugbu a, maka nnukwu ederede ọzọ, olee otu ịpị ebe a n'okpuru.
Ego ole ka ị chọrọ maka ịgba ịnyịnya n'abalị?
Ọ dabere n'ezie n’ọsọ gị. O nwere ike ịbụ na ndị na-agba ịnyịnya na-agba ọsọ nwere ike ịdị mma n'ihe dị ka 200lumensopekempe; ezigbo bụ ihe dị ka 250-400lumens. Fọdụ ndị na-agba ịnyịnya nwere ikenọkwasin'ezie ngwa ngwa offroad nan'abalịmanaanyịchọta ihe ọ bụla n'elu 400lumensanaghị enyere anyị aka ịga ọsọ ọsọ mana ọ na-ere ndụ batrị ọsọ ọsọ.
Kedu ka m ga-esi ahọrọ ọkụ igwe kwụ otu ebe?
Ezigboọkụ igwe kwụ otu ebega-enwu enwu gbaa iji hụ ma hụ ya, mana ọ gaghị enwukwa oke ka ọhụhụ ndị ọzọ.Igwe ọkụna-gosiri na lumens, na 300 lumens ịbụ a kacha nta n'ihi na-aga aga na ọchịchịrị.Ọkt 11 2016
Gịnị kpatara ọkụ MTB ji dị oke ọnụ?
Ha na-efu nke ahụ n'ihi na ndị na-eme yaọkụachọpụta na ndị mmadụ dị njikere ịkwụ £ 200 maka ọkụ. Offọdụ n'ime ha na-fabulously ọma mepụtara, ụfọdụ n'ime ha bụ nanị a ụyọkọ nke ọkọlọtọ elektrọnik tụbara na a ikpe.
1000 lumens dị oke ọkụ?
.B.1000 ọkụtọọchị bụ nnọọenwuna, dabere na oghere ma ọ bụ ihe ngosi ngosipụta, dị ike iji ruo ebe dị mita 200 ma ọ bụ karịa. N'elu elu, ọkụ ndị a ga-agbanye ọbụna batrị kachasị mma na oge elekere.Sep 15 2020
Lightskwado ọkụ igwe m ga-enwu?
Ee, i nwere ike iji naanịenwusi ọkụn'ihu na azụ, ọ bụrụhaala na ha abụọ nwere ike ịtọpụ ma ọ dịkarịa ala anọ candela (kankeji nkeọkụike, ihe dịka 12 lumens, nke kachasị nke oge a gafere karịaọkụ).Ọkụ kwesịrịỌzọkwa naanịgbaan’agbata oge 60 na 240 kwa nkeji (1-4Hz).bọchị 2020
Enwere ọkụ igwe kwụ otu ebe ọ bụla dị mma?
Mana ọ bụ ebe dịkarịrị ọcha na ọkụ karịa U2 LED, dị mma na okpu agha. O juru m anya na batrị niile dị ka ihe dị mma ka ọ dịkwa mma na-agba ọsọ oge, ọ bụ naanị otu nkeji nkeji na ime ihe n'eziokwu yiri ka ọ baghị uru. Ugboro ole na ole na-abanye n'ime oge oyi ma ọ na-agbadata ya n'abalị.
Kedu nke na-egbuke egbuke Cateye n'azụ igwe kwụ otu ebe?
CatEye Rapid X3 bụ ihe ọhụrụ maka 2015/16 ma mekwaa mmepụta nke Rapid X2 dị ugbu a site na 50 lumens gaa na nnukwu lumens 100, na-eme ka ọ bụrụ ìhè na-enwu gbaa ebe a.
Kedu ka esi eji ọkụ igwe kwụ otu ebe na New Zealand?
Ọ bụghị naanị na ha na-enwu ụzọ, ha nwere ike ime ka ndị ọzọ na-anya gị, ndị ọkwọ ụgbọ ala na ndị na-agagharị ije hụ gị mgbe ịnọ n'ọchịchịrị ma ọ bụ obere ọkụ. Anyị na-atụle ihe karịrị ụdị 50 na nke azụ, site na enyemaka nke Consumer New Zealand (CNZ) - nzukọ nwanne anyị nwanyị nke lere ule a.